တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ ဓာတုဗေဒ ဘာသာရပ် ဖြေဆိုနေစဉ် တောင်တွင်းကြီး မြို့နယ်ရှိ ကျောင်းသူ ? - Yangon Media Group
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ ဓာတုဗေဒ ဘာသာရပ် ဖြေဆိုနေစဉ် တောင်တွင်းကြီး မြို့နယ်ရှိ ကျောင်းသူ ?
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုနေစဉ်အတွင်း တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရှိ ကျောင်းသူငါးဦးကို ဆေးရုံအရေး ပေါ်တင်ခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။ ယခုလ ၁၂ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသည့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်ကို ဖြေဆိုခဲ့ရာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရှိ အမှတ် (၁) အခြေခံပညာအထက်တန်း ကျောင်း၊ အမှတ် (၃) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းခွဲ (အလယ် တန်းကျောင်းအမှတ်(၃) မှ ကျောင်းသူငါးဦးတို့သည် စာမေးပွဲဖြေဆိုနေစဉ် မူးဝေခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ကျခြင်းတို့ကြောင့် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ဆေးရုံသို့ အရေး ပေါ်တင်ပို့ခဲ့ရကြောင်း တောင်တွင်း ကြီးမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှ သိရသည်။
”အကုန်လုံးက ကျောင်းသူ တွေချည်းပါပဲ။ တစ်ကျောင်းတည်း ငါးဦးဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ် ကျောင်းက တစ်ယောက်၊ တစ် ကျောင်းက သုံးယောက်၊ နောက်တစ် ကျောင်းက တစ်ယောက်ပါ။ အမျိုးသမီးရောဂါဖြစ်လို့ မူးဝေတာ၊ ဗိုက် အောင့်တာကြောင့် ဖြစ်သွားတာပါ။ လောလောဆယ်တော့ သူတို့အ ခြေအနေကို ကြည့်နေတယ်”ဟု တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ လက်ရှိတွင် အဆိုပါကျောင်းသူငါးဦးမှာ စိုးရိမ်စရာအခြေအနေ မရှိသော်လည်း ကျန်းမာရေးအခြေ အနေအရ စိတ်ချရမှုရှိလျှင် မိမိတို့ ဖြေဆိုရာ စာစစ်ဌာနများတွင်ပင် ပြန်လည်ဖြေဆိုစေမည်ဖြစ်ပြီး စိတ်ချရ သည့်အခြေအနေမရှိပါက ဆေးရုံ တွင်ပင် စာစစ်ဌာနဖွင့်လှစ်ပြီး ဆက်လက်ဖြေဆိုစေမည်ဖြစ်သည်။
”ထုံးစံအရတော့ ကျန်းမာရေး စိတ်ချရရင်သူတို့ဖြေတဲ့နေရာမှာ ပဲ ပြန်ဖြေရမှာပေါ့။ စိတ်မချရသေးဘူး ဒီမှာပဲဆက်နေရဦးမယ်ဆိုရင် တော့ ဆေးရုံစာစစ်ဌာနအဖြစ်လုပ် ရမှာပေါ့”ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။ ယခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲတွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ရှစ်သိန်းလေးသောင်းကျော် ဖြေဆိုလျက်ရှိပြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ခုနစ်သောင်းခုနစ်ထောင်ကျော် ဖြေဆိုနေပြီး တောင်တွင်းကြီးမြို့ နယ်တွင် ငါးထောင်ကျော်ဖြေဆို နေကြောင်း သိရသည်။
''လက်ထပ်ဖို့ မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး'' Kaley Cuoco
ရှေးဟောင်းပစ္စည်း စုဆောင်းထားသူများ မိမိပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများကို တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ခြ?
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်ရန် မြန်မာအစိုးရ ပေးပို့သည့် ဖောင်ကို မရဟု ဆ?
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြေလွတ်မြေရိုင်း သန်းချီ ရှိနေ၊ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် လ?
ဦးကိုနီအမှု အထက်ရုံးသို့ အမှုတွဲများ ပို့ထားသဖြင့် မစစ်ဆေးနိုင်သေး၊ သင်္ကြန်လွန်ကာလသို့ ရုံ??
ချိတ်ထဘီ ပုသိမ်ထီး နဲ့